केहि समयको लागि हाँस्नुहोस्! सर्वश्रेष्ठ मजेदार इन्स्टाग्राम वाक्यांश 🥇
केहि समयको लागि हाँस्नुहोस्! इन्स्टाग्रामको लागि उत्तम हास्यास्पद वाक्यांशहरू
यदि तपाईं हाँस्न र मानिसहरूलाई हँसाउन मन पराउनुहुन्छ, राम्रो संग एक खाता बनाउनु भन्दा कूलर केही छैन इन्स्टाग्राम को लागी वाक्यांशहरु हास्यास्पद अरूलाई राम्रो दिन बनाउनको लागि। त्यसकारण आज हामी तपाईंलाई वाक्यांशहरूको एक राम्रो सूची देखाउँदैछौं जुन तपाईंको दिन पक्कै उज्यालो हुनेछ।
किन हास्यास्पद वाक्यांशहरू छनौट गर्नुहोस्?
धेरै यस्ता छन् जो जीवनको कुनै पनि कारणको लागि काममा खराब दिन, विश्वविद्यालयमा वा दिन राम्रो भएको छैन। त्यसकारण तिनीहरू जहिले पनि केहि खोज्छन् दिन खुसी हुन सक्छ र यसलाई धेरै हल्का बनाउनुहोस्। त्यसोभए तपाईंले पाउनुहुनेछ अनुयायीहरू र तपाईं सक्नुहुन्छ Instagram सँग पैसा कमाउनुहोस्.
यसको साथ रमाईलो छविहरू मार्फत प्राप्त गर्न भन्दा राम्रो तरिका हास्यास्पद वाक्यांशहरूजे होस् यो पागल देखिन्छ, एक सरल वाक्यांशले खराब समय बिताइरहेको जो कोहीको दिन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईं कहिले हास्यास्पद वाक्यांश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
तिनीहरू कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जबसम्म छवि वा भिडियो हंसमुख र रमाईलो छ, यी सबै तपाईंलाई अनुसरण गर्ने सबै मानिसहरूबाट सबै भन्दा राम्रो प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्नका लागि हो। तपाईं यो संग गर्न सक्नुहुन्छ पीसी बाट Instagram कथाहरू.
यी वाक्यांशहरु को बारे मा सबै भन्दा राम्रो कुरा हो तपाई आफैले गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको रचनात्मकता प्रदर्शन गर्नुहोस् अरूलाई हँसाउन।
तपाईंको आत्मा बढाउन हास्यास्पद वाक्यांशहरू
जीवनमा सबै भन्दा राम्रो चीजहरू भस्म हुन्छन्.
केहि गर्न गाह्रो छ, कहिले थाहा पाउँदैनौं जब तपाईं समाप्त गर्नुहोस्.
मित्र भन्दा राम्रो अरू केहि छैन, जब सम्म तपाईं चकलेटको साथी हुनुहुन्न.
म अल्छी छैन, म ऊर्जा बचाउने तरिकामा छु
समय उडान बनाउन, विन्डो बाहिर घडी फ्याक
म यति चलाख छु कि कहिलेकाँही मैले के भनिरहेछु भन्ने एक सरल शब्द बुझ्दिन
हाँस्नुहोस् र संसार तिमीसँग हाँस्नेछ, खर्राउनेछ र तपाईं एक्लै सुत्नुहुनेछ.
तपाईलाई पनि चासो लाग्न सक्छ इन्स्टाग्राम को लागी माया वाक्यांश.
वाक्यांशहरूले तपाईंलाई हाँस्न बनाउँदछ
यौन निष्क्रियता खतरनाक छ, सीs उत्पादन गर्दछ
भगवानले तपाईलाई बचाउनुहुन्छ ... र आशा छ कि तपाई कहाँ बिर्सनुभयो!
म कहिले एक्लै हिंड्दिनँ: म सँधै भोको छु, निद्रा र आलस्य छु, तर एक्लै एक्लो छैन
भावनात्मक स्थिति: म्याकेरेनाको रूपमा प्रस्तुत हुँदै, हेरौं कि कसैले मेरो शरीरलाई आनन्द दिन्छ भने!
मलाई खाना खान पर्दैन ... मेरो व्हाट्सएपका अनुसार म अनलाइन छु
कुनै महिलालाई थाहा छैन कि उनी के चाहान्छन् जबसम्म उनी बिक्रीमा देखिन्न्न्
म यति आशावादी छु कि जब मैले राती एक आवाज सुनेपछि म सोध्छु: 'के तपाईं आफ्नो क्रिश्चियन ग्रे हुनुहुन्छ?'
प्रिय गणित, कृपया, बढ्नुहोस् र मेरो लागि समस्याहरूको समाधान गर्नुहोस्। म तपाईंको लागि उनीहरूलाई हल गर्न थाकेको छु
जीवन हेयर ड्रेसरमा जाँदा जस्तो छ: तपाईं उसलाई के भन्नु हुन्छ जुन उहाँ चाहनुहुन्छ र उसले अण्डाहरूबाट निस्कने काम गर्छ
मेरो रक्त समूह A-Peritive छ
कहिलेकाँही मलाई नराम्रो लाग्छ ... तब म कुर्सी समायोजित गर्छु र मलाई राम्रो लाग्छ
यदि तपाईंको भूतपूर्व भन्छन् "तपाईले म जस्तो कसैलाई कहिले पनि भेट्टाउनु हुन्न", उसलाई बताउनुहोस् कि त्यो विचार हो!
म यहाँ छोड्दै छु, सबै जना पागल छन्, Arre unicorn!
म एक प्रारम्भिक रिसर हुन सक्छ ... यदि बिहान दिउँसो शुरू भयो भने
पृथ्वीले मलाई निल्छ! तर बहामासमा मलाई थुकौं
म कसरी कुरूप 1 मिनेट हुन चाहन्छु
यसले "ओपन इजि" भन्छ र तपाईं दाँत, न nails, कैंची, चाकू, लेजर तरवार र ग्रेनेडहरू प्रयोग गरेर समाप्त गर्नुभयो।
तपाईलाई पनि चासो लाग्न सक्छ इन्स्टाग्राम को लागी छोटो वाक्यांशहरु.
सेलिब्रेटीहरूले भनेका अजीब वाक्यांशहरू
म मृत्यु पछि जीवनमा विश्वास गर्दिन, यद्यपि म अण्डवियर परिवर्तन गर्दछु (वुडी एलन)
पुरुषहरू बैंक खाताहरू जस्तै छन्। अधिक पैसा, अधिक ब्याज तिनीहरू उत्पन्न (मार्क ट्वेन)
म गृहकार्यलाई घृणा गर्छु! तपाईं ओछ्यान बनाउनुहुन्छ, भाँडा माझ्नुहोस् र छ महिना पछि तपाईंले फेरि सुरु गर्नुपर्नेछ (जोन नदीहरू)
दुई चीजहरू असीमित छन्: ब्रह्माण्ड र मानव मूर्खता; र म ब्रह्माण्डको बारेमा निश्चित छैन। (अल्बर्ट आइंस्टीन)
एक विशेषज्ञ यस्तो व्यक्ति हो जसले भ्रमपूर्ण तरिकाले सजिलो केहि व्याख्या गर्दछ जसले तपाईंलाई भ्रममा पार्छ भनेर सोच्न लगाउँदछ (विलियम महल)
एक पुरातत्वविद् एक महिला पाउन सक्ने उत्तम पति हो। उनी जति धेरै उमेर भएकी छिन, ऊ उनीप्रति बढी नै चासो राख्छे। (अगाथा क्रिस्टी)
काम खराब छैन, नराम्रो कुराले काम गर्नु पर्छ (डॉन रामन)
उमेर त्यस्तो चीज हो जुन तपाईं चीज हुनुहुन्न (लुइस बुउएल)
यदि भगवानले मलाई मात्र एक स्पष्ट संकेत दिनुभयो! कसरी स्विस बैंक मा मेरो नाम मा एक ठूलो जम्मा गर्ने (वुडी एलन)
म र मेरी श्रीमती 20 वर्ष को लागी खुसी थियौं। त्यसपछि हामी भेट्यौं (रोडने डन्जरफील्ड)
जब जीवनले तपाईंलाई निम्बू दिन्छ, कसैको आँखामा फालिदिनुहोस् (क्याथी गुइसेवाइट)
पक्कै पनि त्यहाँ सम्बन्ध विच्छेद को लागी धेरै कारणहरु छन्, तर मुख्य एक विवाह हो र हुनेछ (जेरी लुइस)
अवश्य पनि तपाईले विवाह गर्नुपर्दछ। यदि तपाई राम्रो श्रीमती पाउनुहुन्छ भने, तपाई कोही खुशी हुनुहुनेछ। यदि तपाइँ एक खराब प्राप्त गर्नुभयो, तपाइँ एक दार्शनिक बन्नुहुनेछ (सुकरात)
म तपाईंलाई गम्भीरतासाथ लिन चाहन्छु, तर त्यसो गर्नाले तपाईंको बुद्धिको अपमान हुन्छ। (जर्ज बर्नार्ड श)
म टेलिभिजन धेरै शैक्षिक लाग्छ। प्रत्येक चोटि कसैले यो खोल्दा, म अर्को कोठामा फर्कन्छु र पुस्तक पढ्छु (ग्रुपो मार्क्स)
ती व्यक्तिहरू जसले आफूलाई सबै कुरा जान्दछन् भन्ने लाग्दछन् ती साँच्चिकै उपद्रव हुन् जसले साँच्चिकै सबै कुरा जान्दछन् (इसहाक असिमोभ)
तपाईलाई पनि चासो लाग्न सक्छ इन्स्टाग्राम को लागी सुन्दर वाक्यांश.
यी इन्स्टाग्रामका लागि उत्तम अप्रत्यक्ष संकेतहरू हुन्
इन्स्टाग्रामको लागि फोटो लिन यी विचारहरू परीक्षण गर्नुहोस्